Filimku wuxuu movie ugu qaalisan bible abid soo saaray.
xirfadiisa Hollywood fayday bartamihii 60 marka Max von Sydow ku heshiiyeen in ay ka ciyaaraan door Ciise in nin George Stevens oo ka yimid Naasared.
filim cabsi The Exorcist
Max von Sydow lagu yaqaan doorka filimada sida Ingmar Bergman ee " The Toddobaad Khatimidii ", " Muhaajiriinta " iyo filim cabsi ah " Exorcist The ."
Waxa uu leeyahay kabka adag isaga iyo mid ka mid ah doorka ugu dambeeyey ee ka dambeeya, isna wuxuu u adeegay in " Game of Thrones " sida Raven ee Saddex-weershe iyo " Star Wars: Force kicinaysaa The " sida Lor San Tekka.
xirfadiisa Hollywood fayday bartamihii 60 marka Max von Sydow ku heshiiyeen in ay ka ciyaaraan door Ciise ee George Stevens ' Ninka ka yimid Naasared . "
Filimku wuxuu movie ugu qaalisan bible abid soo saaray. Inkasta oo xulba labada daawadayaasha iyo dhaleecayn la magacaabay shan Oscar, laakiin ma jiro won.
Marna ha ka helay Oscar ah
Max von Sydow marnaba helay Oscar kasta oo dunida filimka - oo uu keliya laba jeer loo magacaabay.
Waxa uu ahaa 90 sano jir.
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 00:32